प्रदेश २ मा सत्ता फेरबदलको चर्चा, दाऊमा ‘उपसभामुख’ ! नेकपा-राजपाबीचको सहमतिले तरङ्ग – Sanghiya Online
प्रदेश २ मा सत्ता फेरबदलको चर्चा, दाऊमा ‘उपसभामुख’ ! नेकपा-राजपाबीचको सहमतिले तरङ्ग
Posted on : December 23, 2019 - No Comment
काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालबीच भएको दुई बुँदे सम्झौताले राष्ट्रिय राजनीतिमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ । लामो समयदेखि टाढिएर बसेका दुई दलले राष्ट्रियसभा चुनावमा तालमेल गर्न दुई बुँदे सहमति गरेपछि संघदेखि प्रदेशसम्मको सत्ता समीकरण फेरबदलसम्मको चर्चा शुरु भएको छ । सहमतिपछि प्रदेश नम्बर २ को सत्ता समीकरण नै बदलिन आँकलन गरिएको छ । किनभने हाल समाजवादी पार्टी र राजपा नेपालको संयुक्त सरकार रहेको प्रदेश २ मा गणितीयरुपमा राजपा र नेकपा मिल्दा समाजवादी नेतृत्वको सरकार ढल्न सक्छ ।
उता, राजपाले अख्तियार गरेको पछिल्लो कदमपछि समाजवादी पार्टीले पनि नेकपा मिलेर प्रदेश २ मा सरकार बनाउने कसरत शुरु गरेको । राजपा नेकपासँग मिलेर सरकार परिवर्तन गर्ने खेलमा लागेको खण्डमा समाजवादी पार्टीले पनि त्यस्तै खेल खेलेर नेकपासँग पनि अर्को सरकार बनाउन सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।
र, यसको प्रयास पनि भित्रभित्रै भइरहेको स्वयम् समाजवादी पार्टीका नेता बताउँछन् । समाजवादी पार्टीका एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘यदि राजपाले नेकपालाई प्रदेश २ को नेतृत्व दिनसक्छ भने समाजवादीले किन सक्दैन ? समाजवादीले नेकपालाई मुख्यमन्त्री दिएर आफ्नो सरकार बचाउन पनि सक्छ । राजपाले आफूलाई मात्र खेलाडी हुँ भनेर नसम्झोस् ।’ यद्यपि, तराई मधेशका जनताले प्रदेश २ को सरकार चलाउने म्याण्डेट समाजवादी पार्टी र राजपालाई मात्र दिएको उनको तर्क छ ।
प्रदेश २ को सरकार परिवर्तनमा पनि नेकपामा दुईवटा धार हावी छ । नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड समाजवादी पार्टीको पक्षमा छन् भने अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली राजपा नेपालको पक्षमा छन् । अध्यक्ष ओलीले नरुचाइरहेका उपेन्द्र यादव प्रचण्डका प्रिय पात्र हुन् । यही कारणले प्रदेश २ को सत्ता समीकरण कतातिर ढल्किन्छ भन्नेमा अझै अन्यौल नै रहेको छ ।
राजपासँग २ बुँदे सहमति गर्दा प्रदेश २ को सत्ता समीकरण पनि परिवर्तन गर्ने आन्तरिक सहमति भएको नेताहरु बताउँछन् । नेकपाका नेताहरु भन्छन्, ‘यो हुनसक्छ, यो कुनै नौलो कुरा होइन । प्रदेश २ का सरकार अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेको छ, त्यहाँ परिवर्तन आवश्यक देखिएको छ ।’
प्रदेश २ का सरकारको नेतृत्व गरेको समाजवादी पार्टीले भने नेकपा र राजपाबीच भएको २ बुँदे सम्झौताले प्रदेश सरकारमाथि कुनै असर नगर्ने प्रतिकृया दिइरहेको छ । त्यस्तै, राजपा नेपालका नेताहरुले पनि दुई बुँदे सम्झौताले मात्र सत्ता समीकरण हेरफेरसम्मको अवस्था नआउने दाबी गरेको छ ।
प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन बारेमा नेकपाका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले पटक–पटक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको कामप्रति प्रधानमन्त्री ओली पहिलादेखि नै सन्तुष्ट छैनन् । केही समयअघि प्रदेश २ मा भएको एक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले समेत प्रदेश २ को सरकार सञ्चालन बारेमा टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रदेश २ सरकारमा अनियमितता र भ्रष्टाचार भइरहेको र यसको विकल्प खोज्न सकिने उनले धारणा राखेका थिए । नेकपाले त्यसै बेलादेखि नै प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन गर्ने तयारीमा लागेको मधेशको राजनीतिलाई नियाली रहेका विश्लेषकहरु बताउँछन् । यसैका लागि नेकपाले त्यहाँको दुई सत्ता साझेदार दलमध्ये राजपा नेपाललाई रोजेको उनीहरुको भनाइ छ । त्यही अनुरुप नेकपाले राजपा नेपाललाई संघीय सरकारमा सहभागी गराउन पटक–पटक आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीनिकट नेताहरुले राजपा नेपालका नेताहरुसँग पटक–पटक छलफल गरेका थिए । तर, राजपा नेपालले रेशम चौधरीको रिहाइलाई मुख्य एजेण्डा बनाउँदा कुरा बीचकै अड्किएको थियो । तर, यो दुई बुँदे सम्झौताले राजपा नेपालका लागि पनि सत्ता सहकार्यका लागि बाटो खुलेको छ ।
यद्यपी, राजपा नेपाल अध्यक्षमण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतोले भने दुई बुँदे सम्झौताले मात्र सत्ता सहकार्य हुने कुनै सम्भावना नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेकपासँगको २ बुँदे सम्झौताले मात्रै सरकारमा जाने बाटो खुल्दैन, राजपा नेपालको माग र मुद्दा सम्बोधन हुने हो भने सरकारसँग सहकार्य हुनसक्छ ।’ दुई बुँदे सहमति प्रदेश २ को सरकारलाई पनि कुनै असर नगर्ने उनले दावी गरे ।
यद्यपी सरकारसँगको सहकार्यको सम्भावनालाई भने उनले नकार्न सकेनन् । उनले भने, ‘सरकारसँगको सहकार्यको सम्बन्धमा सरकारको व्यवहार र क्रियाकलाप र हाम्रो गतिविधिले निर्भर गर्छ । राजपाको माग र मुद्दा सम्बोधन हुने हो भने सरकारसँग सहकार्य हुनसक्छ ।’
तर, नेकपा नेता एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले राजपा नेपालसँग ‘थप’ सहकार्यको सम्भावना रहेको बताएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बास्कोटाले नेकपा र राजपाबीच भएको सहमति चुनावी गणित नपुगेर गरिएको कार्य नभएको स्पष्ट पारेका थिए । आफूहरुले कसैलाई पनि विपक्षी बनाउन नचाहेको उनले बताएका थिए । दुई बुँदे सम्झौता गराउनमा मुख्य भूमिका खेलेका बास्कोटाले राजपा नेपालसँग सत्ता साझेदारीसम्म हुनसक्ने स्पष्ट संकेत गरेका थिए । नेकपाका नेता रामकुमार शर्माले पनि प्रदेश २ को सत्तासमीकरण परिवर्तन हुने सम्भावना रहेको बताए । राजपा र समाजवादी पार्टीले केन्द्रमा नेकपासँग सहकार्य गरे पनि प्रदेशमा अलग राख्ने काम गरेको बताउँदै उनले केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि नेकपाले सहकार्य खोजेको बताए । यदि राजपा नेपालले दुई बुँदे सम्झौताको पालना गरेर अगाडी बढ्यो भने प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन हुनसक्ने शर्माले बताए ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेकपा र राजपा नेपालको दुई बुँदे सहमतिले प्रदेश सरकार परिवर्तन हुने कुराको खण्डन गरे । उनले राजपा र नेपालको सहमतिले प्रदेश २ सरकारलाई कुनै फरक नपर्ने प्रतिकृया दिएका छन् । राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टीका लागि संघीय सरकार र प्रदेश सरकार अलग–अलग कुरा रहेको उनले स्पष्ट पारे । राजपा नेपाल संघीय सरकारमा सहभागी भएपनि त्यसको असर प्रदेश सरकारलाई नपर्ने उनले दावी गरे ।
यता, पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठ पनि समाजवादी पार्टीसँग एकता नभएसम्म अरु पार्टीसँग सहकार्य गर्न राजपा नेपाल स्वतन्त्र रहेको बताउँछन् । उनले पनि यो सहमतिले मात्र प्रदेश २ सरकारमाथि कुनै असर नपर्ने बताए ।
प्रदेश २ को सरकारले उदाहरणीय कार्य गरेको पनि उनले दावी गरे । प्रदेश सरकारले शतप्रतिशत समानुपातिक समावेशी हुने गरी विधेयक पारित गर्नुका साथै नयाँ स्थापित हुने उद्योगहरूलाई २० वर्षसम्म कर छुट, सीमान्तकृत शिल्पी, मुस्लीम र विपन्न परिवारलाई प्रोत्साहन स्वरूप छात्रवृत्ति, ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउ अभियान’ अन्तर्गत दश हजार छोरीहरूका लागि शिक्षा वीमा जस्तो कार्यक्रम लोकप्रिय भएको उनले दावी गरे ।
माघ ९ गते हुने सभामुखको चुनावमा राष्ट्रिय जनता पार्टीले उपसभामुख पदमा दावी गरेको छ । यो कुरा ती पार्टीका नेताले नेकपासमक्ष पनि पुर्याइसकेका छन् । नेकपाले राजपालाई उपसभामुख दिएको खण्डमा प्रदेश २ को सत्ता समीकरण पनि हेरफेर गर्ने सर्त राख्न सक्ने आँकलन गरिएको छ । राजपा नेपालका अध्यक्षमण्डलका संयोजक महतोले भने, ‘उपसभामुख प्रतिपक्षलाई जाने भएको हुनाले हाम्रो दललाई पनि आउन सक्छ । तर त्यसको बारेमा नेकपासँग सहमति हुन बाँकी रहेको छ ।’
प्रदेश २ को अङ्कगणित
प्रदेश २ मा आएको मत अनुसार कुनै पनि एउटा दलले सरकार बनाउन सक्दैन । प्रदेश २ मा पनि सबभन्दा ठूलो दल नेकपा भएको छ । सरकार बनाउनका लागि ५४ जना प्रदेशसभा सदस्य चाहिन्छ । त्यसमा नेकपासँग ३२, काँग्रेससँग १९, राजपा नेपालसँग २५ र समाजवादी पार्टीसँग ३० जना सदस्य रहेका छन् । त्यहाँ गठबन्धनको सरकार बनाउनु बाहेक विकल्प छैन ।
नेकपा र काँग्रेसले मिलेर सरकार बनाउन सक्दैन । काँग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन अन्य दुईटा दल मिल्नैपर्छ । तर त्यो सम्भावना न्यून छ । बाँकी रहेका तीन दलमध्ये कुनै पनि दल एक अर्कासँग मिलेपछि सजिलै सरकार बन्छ । नेकपा र राजपा मिल्यो भने ५७ सीट हुन्छ । त्यस्तै, नेकपा र समाजवादी मिल्यो भने ६२ सीट हुन्छ । अहिले राजपा र समाजवादी मिलेर ५५ सीटका साथ लिएर सरकार बनाएकै छन् ।
पहिला फोरम नेपालसँग २९ सीट थियो । पछि एकजना स्वतन्त्र सीट भएका मोहम्मद शेख अबु कलाम आजाद समाजवादी पार्टीमा प्रवेश गरेपछि ३० वटा सीट भएको हो । त्यसअघि राजपा र समाजवादीको ठ्याक्कै ५४ सीट मात्र पुगेको थियो ।
सडकबाट भएपनि संसद पुनःस्थापना गराएरै छाडछु ः जसपा नेता दास ।
साबधान ! हिजो नेवारको घरमा डोजर चलाउनेहरु आज भोट माग्न आउदै छन् -मेयर पदका उम्मेदवार पबित्र बज्राचार्य
दोस्रो चुनाब अघि संबिधान संशोधन भएन भने पहिलो चुनाबको बक्साहरु डम्पिङ्ग साइटमा फ्याली दिने उपेन्द्र यादवको चेतावनी
प्रचण्ड कार्यकारी अधिकारसहितको अध्यक्ष, ओलीले अधिकार दिदैन भन्नेलाई जोडदार झापड
प्रधानमन्त्री ओली जुन हातले मन्त्रालयहरु घटाए त्यहि हातले थप्दै, १८ बाट २२ हुदै २८ मन्त्रालय हुने
आक्रोसमा राउतले खोले पोल ! भने-“मधेशीसँग गद्दारी गर्ने बेईमान पार्टीसँग सावधान रहनुस “
खम्बुवान मोर्चाका अध्यक्षसहित १९५ ले गरे जनता समाजबादीमा प्रवेश, अशोक राईले गरे स्वागत
भारतले नेपालका किसान र जनतालाई सधै सहयोग गरेछ: प्रदेश प्रवक्ता अकरम पठान
राजपा नेपाल पछि फेरी आज अर्को पार्टी जनता समाजबादी पार्टी संग एकता गर्दै , यस्तो छ तयारी